Legian Beach any Bali. Indonezia " Journey-Assist
Pejy fandraisana » Eran-tany / Faritra » Asia » Indonezia » Bali » Legian Beach any Bali. Indonezia
Topimaso momba ny Legian Beach any Bali
I Legian dia tanàna kely iray 7 km atsimo atsinanana Denpasar... Ny morontsiraka manana anarana mitovy ihany eo anilan'ity tanàna ity no iray amin'ny tsara indrindra any Bali. Sahabo ho 1,4 km ny halavan'ny Legian Beach. Ny sakany dia somary maherin'ny 30 m. Ny moron-dranomasina dia rakotra fasika mavo volondavenona niandohan'ny volkano. Ity morontsiraka ity dia mampiavaka ny toerana antonony eo anelanelan'ny hatsaran-tarehy Nusa dua na morontsiraka malalaka Kuty... Milamina ny zava-drehetra eto. Ary antonony ny haavon'ny fampiononana ary tsy manelingelina ny fotodrafitrasa.
Fasika amin'ny Legian
Legian dia azo antsoina hoe morontsiraka somary madio. Miasa tsy tapaka eto ny fitaovana sy mpiasa manokana, manangona fako navelan'ny mpizahatany. Tombony iray hafa an'ny Legian manoloana ny fotodrafitrasa amoron-dranomasina maro any Bali ny farany ambany, izay tsy misy vato sy haran-dranomasina. Na izany aza, tsy mety amin'ny filomanosana izy io - lava loatra ny fidirana anaty ranomasina, indrindra amin'ny fiakaran'ny rano. Rehefa avy nandalo 30 m ianao dia azo atao ny milentika ao anaty rano any amin'ny valahana ihany. Ho fanampin'izay dia matetika misy onja mahery eo akaikin'ny morontsiraka, izay atahorana na dia ho an'ny mpilomano mahay aza.
Fa amin'ny fivezivezena dia safidy tsara i Legian, noho ny faritany goavambe sy onja mahery miakatra mandavantaona. Ny mampiavaka an'ity toerana ity dia miankina amin'ny fahafahanao milalao surf eto amin'ny vanim-potoana rehetra. Indraindray aza ny Legian dia mampiantrano fifaninanana matihanina.
Filentehan'ny masoandro ao amin'ny Beach Legian
Misy ihany koa ny masoandro mody tsara tarehy eto - tsara tarehy kokoa noho ny toerana rehetra eto amin'ny nosy. Mpaka sary maro no tonga eto amin'ny hariva manokana mba haka sary ny masoandro mena milentika mankamin'ny ranomasina.
Legian dia toerana tsara hijerena ny masoandro mody
Zavatra tokony hatao ao amin'ny Legian Beach
Ao amin'ny faritry ny morontsirak'i Legian sy ny faritra akaiky azy dia afaka mahazo ireto fialamboly manaraka ireto ny mpizahatany:
Baolina kitra amoron-dranomasina.
Bara sy trano fisakafoanana mitsidika.
Tsy misy sarany ny fidirana amin'ny faritry ny morontsiraka. Misy fijanonana voaambina eo akaiky eo. Raha avela eo ny bisikileta dia mila mandoa ianao 1 000 ropia. Misy fiantraikany eo amin'ny torapasika ihany koa ny akaikin'ny Kuta be tabataba. Hatramin'izay dia mila minitra vitsivitsy amin'ny bisikileta fotsiny ianao vao tonga any amin'ny toerana misy ny fiainana amin'ny alina. Fa amin'ny fotoana iray ihany, eo amin'ny faritra amoron-dranomasina Legian amin'ny alina dia somary mangina sy milamina. Any amoron-dranomasina, mivoatra mavitrika ny serivisy, ohatra, ny fanaovana tatoazy, manotra, volo mirandrana, na maro hafa.
Legian Beach dia any atsimon'ny Bali, 7 km miala an'i Denpasar amin'ny lafiny atsimo andrefana, na mankany atsimo ho an'ny 7 km mitovy amin'ny Seranam-piaramanidina Nasionaly Bali. Miatrika ny Legian any andrefana, mahatonga azy io ho tsara hijerena masoandro mody.
adiresy: Legian Beach, Jalan Padma Utara 80361, Legian, Bali, Indonesia
mandrindra: -8.70351, 115.164474
Tora-pasika Lovina amin'ny sari-tanin'i Bali
Tora-pasika Legian amin'ny sari-tanin'i Bali
Tora-pasika Legian amin'ny sari-tany zanabolana Bali
Sarin'ny tora-pasika Legian any Bali
Filentehan'ny masoandro amin'ny Legian
Fotodrafitrasa momba ny Legian
Tora-pasika Legian any Bali